Home Wararka Cumar Cabdirashiid oo ku biiraya musharaxiinta u tartameysa jagada Madaxweynaha Soomaaliya
Ra’iisal Wasaarihi hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa la filayaa in uu dhawaan ku dhawaaqo musharaxnimadiisa uu ugu tartamayo jagada madaxweynaha Soomaaliya. In mudo ah ayaa la isla dhexmarayay in Cumar Cabdirashiid danaynayo in uu ku biiro musharaxiinta u tartamaysa jagada madaxweyaha Soomalaiya.
Sida ay MOL u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay, Cumar Cabdirashiid ayaa ugu danbeeyntii go’aansaday in uu noqdo Musharax. Cumar oo la hadlay saaxibadiisa gaarka ah ayaa u sheegay in ay jirto fursad uu qof Daarood ah madaxweyne lagu dooran karo, madaama, sida uu sheegay “uusan jirin shaqsi Hawiye ah ee kursiga ka qaadan karo Farmaajo”.
Cumar oo la weydiiyay in uu ku biirayo kooxda Midowga Musharaxiinta ayaa yiri “ragaas waan garanayaa, midowgana ujeedadii loo abuuray waa ay dhamaatay, mar hadii doorasaho la’aadayo ma jiri doonto wax la yiraahdo Midowga Musharaxiinta, ninkastaa isaga ayaa tiisa u cararaya, anigana ku biiritaankooda wax faa’iido ah kama arko”.
Dad badan ayaa rumeysan in sababta uu Cumar Cabdirashiid ugu dhawaaqayo musharxnimadiisa ay tahay isaga oo ka hortagayo musharaxnimada Saciid Cabdullahi Deni. Cumar ayaa doonayo in uu si toos ah uu uga hortago hamiga Saciid Deni, kaas oo uu rumeeysan yahay in uu ka fashilyay fursadiisii uu isaga ka lahaa doorashada ee sanadakii 2016/17.